အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန် 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန် 2019
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 30/01/2021)
စားသောက်ဆိုင်ဘလော့ဂ်အရသိရသည် ဒဏ်ငွေလေးအတွက်အသင့်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို. အစ်မနဲ့အစ်ကိုအဖွဲ့ Catia နှင့် Mauro Uliassi နေဖြင့် Run, စားသောက်ဆိုင်ပင်လယ်စာအပေါ်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာအာရုံကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်မြည်းစမ်း menus တွေနှင့်ala လှည်းထမင်းစားခန်းနှစ်ဦးစလုံးကမ်းလှမ်း. Uliassi ယခုသည်အခြားကိုးဦးသုံးကြယ်ပွင့်တစ်ခုဖြစ်တယ် အီတလီမှာစားသောက်ဆိုင်. ဤသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သုံးကြယ်ပွင့်များ၏သမျှသောသူတို့ကိုဆိုလိုသည် ခရီးစဉ် သူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုထိန်းသိမ်းထား, ကျော်ကြားတဲ့ Modena စားသောက်ဆိုင်အပါအဝင် Osteria Francescana.
များများရှိပါတယ် လန်ဒန်အဘို့ဆောင်သောရထား ဥရောပတစ်လွှားအမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင်. မှဦးခေါင်း SaveATrain အကောင်းဆုံးကို GRUB ထွက်ထွက်စစျဆေးဖို့မိနစ်အတွက်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဖို့!
နယ်သာလန် (သို့မဟုတ်ဟော်လန်) သေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကျော် icon များဖြင့်ပြည့်နေသည်. တင့်တယ်မီးသီးလယ်ကွင်း, လေရဟတ်, ဒိန်ခဲ စျေးကွက်, သစ်သား ဖိနပ်, အမ်စတာဒမ်၏တူးမြောင်း, ဟောငျးမာစတာ၏လက်ရာ, Delft အပြာရောင်မြေထည်, အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော ရေ-စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်သန်းပေါင်းများစွာ စက်ဘီး. ထိုအခါစက်ဘီးအဘို့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်. နှင့် 2019 နယ်သာလန်နိုင်ငံအဘို့အ Michelin လမ်းညွှန်တစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိခြင်း 571 စားသောက်ဆိုင်များနှင့် 263 ဟိုတယ်များ. သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းလိုတော့တာပေါ့.
မက်ဒရစ် ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် 3,100 စားသောက်ဆိုင်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးကိုရွေးချယ်အနည်းငယ်ဟာကျော်ကြားခြင်းဖြင့်ကြယ်ပွချီးမြှင့်ခဲ့ကြ Michelin လမ်းညွှန်. ရှိပါတယ် 16 Michelin ကြယ်ပွနှင့်အတူချီးမြှင့်မက်ဒရစ်အတွက်စားသောက်ဆိုင်: DiverXO (ကြယ်သုံးပွ); Santceloni, la Terraza del ကာစီနို, Sergi Arola, Ramon Freixa မက်ဒရစ်နဲ့ El ကလပ် Allard (နှစ်ခုကြယ်များ); နှင့် Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, ဆိတ်သငယ်ကိုများနှင့် Punto MX (တဦးတည်းကြယ်ပွင့်). ဖြည့်စွက်ကာ, မြို့သူမြို့သားတဦးတည်းစားသောက်ဆိုင်၏ဆင်ခြေဖုံးတွင် (အခံွ) နှစ်ခုကြယ်များရှိပြီးသုံးတကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်: CASA ဟိုဆေး, Chiron, နှင့် Montia. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအစားအသောက်အစေခံခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်.
စားဖိုမှူးများ၏ဖန်တီးမှု ဒါဝိဒ်သည်Muñoz ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသဘောကျပြီးအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ရှိ. အေးချမ်းသော, သတ္တိ, တီထွင်ဖန်တီးမှုသည် DiverXO ၏အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်. ရာသီနှင့်အတူဤစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ menu ကအပြောင်းအလဲများ, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုသာဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်. အဆိုပါ XOW Menu ကိုနှင့် Menu ကိုGlotón XOW. Both the menus offer the same food and only vary in quantity and price.
#Michelin #michelinstar #နယ်သာလန် အစာ eng ခရီးသွား travelitaly netရာဝတီ travelspain